UZille uhoxe ohlelweni lwephephandaba | IOL Isolezwe
UZille uhoxe ohlelweni lwephephandaba
Isolezwe / 22 January 2013, 2:04pm / SAPA
UMBIKO wephephandaba langeSonto, iCity Press, mayelana nohlelo lwephephandaba lansukuzonke iThe New Age lapho kusuke kumenywe khona osopolitiki abadumile esidlweni sasekuseni bezophonswa ngemibuzo bephumela eshashalazini, usuholele ekutheni umholi we-DA, uNkk Helen Zille, ahoxe ekubeni yingxenye yalo.
Bese kuzoba ngokwesibili uZille ephumela eshashalazini kulolu hlelo olubizwa nge-New Age Business Breakfast.
UZille uthi uhoxe emuva kokuthola ukuthi uhlelo lonke lusuke luxhaswe ngemali kahulumeni.
“Mina nabanye abaholi abaphezulu be-DA sesike sakhuluma kwi-New Age Business Breakfasts, ngoba sizitshela ukuthi uhlelo lusuke luxhaswe yiphephandaba namalungu omphakathi asuke ethenge amathikithi okuba yingxenye yalo,” kusho uZille esitatimendeni.
Uthi njengoba sekune-mibiko yokuthi lusuke luxhaswe ngemali kahulumeni kusetshenziswa izinkampani ezingaphansi kukahulumeni ngezigidi zemali, ngeke besaqhubeka nokuba yingxenye yalo.
ICity Press ibike ukuthi kunezinkampani ezinkulu ezingaphansi kukahulumeni ezifaka izigidi zemali kulesi sidlo sasekuseni esisuke sibizwe wumndeni womacaphuna kusale wakwaGupta.
Ngokombiko weCity Press, uTransnet ukhokhe u-R17.5 million ngezinhlelo ezingu-18 zalesi sidlo, kwathi u-Eskom wakhokha R7.2 million ngokuxhasa izinhlelo ezifanayo eziyisithupha phakathi kukaNovemba 2011 nonyaka odlule. Kuthiwa noTelkom waxhasa ngo-R12 million. I-SABC kuthiwa ayibakhokhisi lutho abeNew Age ngokusakaza bukhona lolu hlelo ku-SABC2.
UZille uthe izolo ubhalele umhleli weThe New Age, uMnuz Moegsien Williams emazisa ngesinqumo sakhe.
Isikhulu esiphezulu kwiThe New Age, uNazeem Howa, izolo siphendule umbiko weCity Press ekhasini lokuqala kwiThe New Age sithi ukugxekwa kwabo yileli phephandaba kwenzeke ngesikhathi besajabulela izithelo zeminyaka emibili baqala ukushicilela iphephandaba labo.
“Izinhloso zethu zisobala futhi zisezithebeni zomphakathi sizoba inkampani enkulu yamaphephendaba futhi sizobaphonsela inselelo nalabo ababika izinto ezingezinhle ngenkululeko yethu,” kusho uHowa.
Uthe ukugxekwa kwabo kusazoqhubeka njengoba nabo beqhubeka nokukhula.